I-Netherlands sele inandipha ulwazi lwezothutho lukawonkewonke kwi-Apple Maps | Ndisuka mac
Ukulandela ubungqingili babo obuqhelekileyo xa kufikwa ekwandiseni iinkonzo ezibonelelwa ngeeMephu zeApple, abafana baseCupertino basandula ukongeza iNetherlands njengelinye lamazwe abonisa ulwazi malunga nezithuthi zikawonke-wonke ngeemephu ze-Apple, ukusuka ke ukuba sityelele ilizwe, asizuku Kuya kufuneka usebenzise isithuthi esiqeshiweyo, u-Uber okanye efanayo ukuze ujikeleze. Ngeli xesha I-Apple ifake lonke ulwazi olunxulumene nazo zonke izikhululo Ukusuka apho singakhwela khona uloliwe okanye ibhasi ukuya kwindawo esiya kuyo, nangona okwangoku ulwazi olukhoyo ngazo zombini iinkonzo zothutho zingekabikho.
Okwangoku asazi ukuba izakuqala nini ukunika ulwazi bukhoma malunga nothutho kodwa ngokwamarhe athile ahambelana neApple, ungayenza kungekudala emva kokubhiyozelwa kweWWDC, eza kuqala ngoJuni 5 Kwaye iya kuba ngumpu wokuqala wenkampani esekwe eCupertino ukumilisela ii-betas zokuqala zazo zonke iinkqubo zokusebenza ebesebenza kuzo kunyaka ophelileyo. Kwinyanga ephelileyo izixeko iAdelaide (Australia), Paris (France) kunye neSingapore nazo zifumene olu lwazi luxabisekileyo kubo bonke abasebenzisi abatyelelayo okanye abahlala kweli lizwe.
Amanyathelo okuqala e-Apple Maps kulwazi malunga nezithuthi zikawonke-wonke avele kwi-iOS 6, ngonyaka ka-2012, xa abafana baseCupertino balahla usetyenziso lweMaphu zikaGoogle ngokwendalo kwaye unikezela ngenkonzo ye-lousy service, inkonzo yemephu eyasungulwa ngokukhawuleza kwaye isebenza. Kungekudala emva kokumiliselwa kwayo, iApple yayeka ukunikezela olu lwazi ukuyifaka kwakhona kunye nokuqaliswa kwe-iOS 9. Ukusukela ngoku, kancinci kancinci, ngakumbi nangakumbi izixeko ziyaludibanisa olu hlobo lolwazi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Netherlands sele inandipha ulwazi lwezothutho lukawonkewonke kwiiMephu zika-Apple